Markaad iskuul dhigato / Applicants - Unemployment Insurance Minnesota
Si aad xaq ugu yeelato lacagta ceymiska shaqa-la'aanta, waa in aad diyaar u tahay shaqo iyo in aad si joogto ah shaqa-raadis u tahay. Taas macnaheedu waa:
Inaysan jirin wax hadda kaa hor istaagi kara inaad shaqeysato haddii shaqo lagu siiyo, iyo;
Inaad toddobaad kasta raadsaneyso shaqo aad aqoon u leedahay.
Dadka iskuul dhigta – gaar ahaan iskuul maalin kasta ah – macnaheedu waa in aysan diyaar u ahayn in ay shaqo aadaan ama inaysan xaqiiqa ahaantii shaqa-raadis ahayn. Dadka kale, iskuulkoodu waa saacado yar oo si fiican ayey shaqo u raadsan karaan toddobaad kasta (oo isla marka ay shaqo helaan waa ay bilaabi karaan). Si aad xaq ugu yeelato lacagta ceymiska shaqa-la'aanta waxa ay ku xiran tahay xaaladdaada.
Codsigaaga bilowga ah ee ugu horreeya, iyo sidoo kale toddobaadyada ku xiga ee codsiga lacagta, waxaa khasab ah in aad noo soo sheegto haddii aad iskuul dhigato. Sidoo kale waa inaad noo soo sheegto sida uu iskuulkaad dhigato saameyn ugu leeyahay shaqa-raadiska iyo sidaad adigu diyaar u tahay. Shaqaaluhu waxa ay macluumaad kasta u adeegsan doonaan si loogu go'aamiyo lacagta shaqa-la'aanta ee aad xaqa u leedahay.
Dadka oo ay xaaladahoodu kala duwan yihiin awgood, waxaan badanaa u sheegnaa qof kasta oo ay ku dhacday shaqa la'aan in uu soo codsado ceymiska shaqa-la'aanta. Adigu keliyaa ha iska go'aansan in aadan xaq u lahayn. Sharcigu waa adag yahay oo MARNABA lagaama filayo inaad ogaato markaad ku khasban tahay inaad codsato.
Xaq u yeelashada PUA ee Ardeyda dugsiga sare
Sharciga CARES Act waxa uu ka kooban yahay barnaamijyo badan oo cusub oo ay maalgeliyaan federaalka oo ah ceymiska shaqa-la'aanta si loo caawiyo dadka uu saameeyey xanuunka COVID-19.
Mid ka mid ah barnaamijyadaas oo ah Taakuleynta Shaqa-laanta Xanuunka Faafaya Awgiis (Pandemic Unemployment Assistance ama PUA), waxa loo hayaa:
Qofkaan xaq u lahayn lacagta ceymiska shaqa-la'aanta caadiga ah
Qofka ay ku dhacday shaqa-la'aan oo ay sababtuna tahay COVID-19
Qofka ka soo baxa sharuudaha shaqa-raadiska ee xaqa u yeesha
Sida uu dhigayo sharciga Minnesota ee la ansixiyey 1998, ardeyda dugsiga sare sharci ahaan xaq uma laha ceymiska shaqa-la'aanta caadiga ah. Hase yeeshee, go'aan la soo saaray mar dhow ayaa dhigaya in qaar ka mid ah iskuuleydu heli karaan PUA.
Waxa aad u baahan tahay inaad ogaato
Haddii aad mar hore codsatay, uma baahnid in aad mar labaad codsatid. Waxaa la eegayaa macluumaadkii lagaa helay si go'aan looga soo gaaro waxa aad xaq u leedahay.
Haddii aan kaa rabno macluumaad dheeraad ah, waan kula soo xiriireynaa.
Haddii laguu diiday lacagta PUA, oo ay sababtuna tahay in aad ku jirto/ku jirtay dugsiga sare, waxaa lagu jiraa hawshaada.
Haddii aadan weli iskuulka ka qalinjebin: waxaan eegeynaa sida aad hadda xaq ugu leedahay lacagta intii ay ku haysay shaqa la'aanta. Waxaa laguu soo dirayaa su'aalo qoraal ah haddii aan kaa rabo macluumaad dheeraad ah. Su'aalaha qoraalka ah waxaa laguu soo gelinayaa kadinka intarnetka.
Haddii aad iskuulka ka qalinjebisay, oo aadan shaqo helin muddo intaadan qalinjebin ka hor: waxaa la eegayaa sida aad xaq ugu yeelan karto lacagta PUA wakhtigii aadan shaqo haysan ee intaadan qalin jebin ka hor. Waxaa laguu soo dirayaa su'aalo qoraal ah haddii aan kaa rabo macluumaad dheeraad ah. Su'aalaha qoraalka ah waxaa laguu soo gelinayaa kadinka intarnetka. Waxa kale oo aad xaq u yeelan kartaa lacagta ceymiska shaqa-la'aanta markii aad qalinjebisay ka dib. Waxaan eegeynaa koontadaada si looga xaqiijiyo inaan loo qaadan ama lagugu khaldamin inaad hadda dhigato dugsiga sare.
Waxa kale oo aan u baahan karnaa su'aaloo dheeraad ah si loo hubiyo aqoonsigaaga. Dad xada aqoonsiga dadka ayaa mararka qaar isticmaala Sagaal Lambar oo been ah si ay ugu codsadaan ceymiska shaqa-la'aanta.
Shuruudaha federaalka ee xaqa loogu yeesho PUA waa wax adag. Sidaas awgeed, hawsha qaarkeed wakhti badan ayey qaadataa. Dad kale oo aad taqaan ayaa jawaab degdeg ah hela (ama aad ayaa looga soo daahaa) oo wakhtigoodu waa kaa sii dheer karaa.
Waxaad u baahan tahay inaad sameyso
Sida u dhakhso badan u soo codso lacagta ceymiska shaqa-la'aanta haddii aadan mar hore codsan
Soo codso lacagta usbuuc kasta intaadan shaqo haysan.
Iska hubso macluumaadka kuugu jira codsiga intarnetka si aad u xaqiijiso in uu sax yahay.
Iska hubso maalin kasta waraaqaha iyo farriimaha codsigaaga.
Sida ugu dhakhso badan uga soo jawaab su'aal kasta oo aan ku soo weydiino. Sidaas ayaa si degdeg ah looga sii shaqeyn karaa codsi kasta.